Tuesday June 17, 2014 - 19:35:39 in Wararka by Web Admin
Garoonkan oo weliba ah mid gaar loo leeyahay ayaa waxaa dhisay Xasan Waraabacade, oo hore u ahaan jiray ciyaartoy caan ah, oo usoo dheeli jiray kooxihii heerka kowaad ee kubada cagta ee Soomaaliya, gaar ahaana kooxdii Madbacada Qaranka sanadihii side
Magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxaa rasmi ahaan ay u yeelatay garoonkii ugu horreeyay ee kubadda cagta oo roog caws macmal ah.
Xasan Waraabacade, wuxuu u sheegay BBCda in mudaba uu ku fekerayay in Hargeysa uu ka hirgeliyo garoon casri ah oo dhallinyaradu si raaxa leh ugu ciyaaraan kubadda cagta oo leh dooga cagaaran ee aan dabiiciga ahayn ee hadda garoomada ciyaaraha ee caalamka loo isticmaalo.
Wuxuu sheegay in rooggan uu ka keenay dalka Shiinaha, iyadoo bedka garoonku yahay 20mX40m, taasoo ay markiiba ku ciyaaraan kubada cagta laba kooxood oo ka kooban min shan ciyaartoy.
Wuxuu kaloo sheegay in uu ku talo jiro in garoonka weyn ee kubadda cagta ee Hargeisa Stadium ay dhowaan ku goglaan roogan oo kale.
Garoonkan cawska doogga ah la dhigay waa mushquul maalin walba oo 3da galabnimo ilaa iyo saqda dhexe ee 12ka habeenimo ayaa saacad walba laba kooxood oo dhallinyaro ahi ay galaan oo ay ku dheelaan kubadda cagta.
Weriyaha BBC Axmed Saciid Cige oo booqday garoonkan ku cusub Hargeysa ayaa dhallinyarada ku ciyaareysay kubadda cagtu waxa ay u sheegeen inay ka reysteen dhaawacyadii ay kala kulmi jireen turunturooyinka garoomada ciidda ah ee Hargeysa.
Laba kooxood oo dhallinyaro ah oo ku ciyaareysay kubadda cagta xilligaasi ayaa waxaa muuqatay inay kooxi 11 gool kaga badisay kooxda kale.